Retouching sary miendrika Zombie amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Fomba fanarenana sary Zombie miaraka amin'ny Adobe Photoshop mamorona endrika ivelany Zombie ao aminay sary ho an'ity Hallowen. Alao ny fiovan'ny sarinao miaraka amin'ity vokatra mahaliana ity izay mitady hamorona retouch somary tsotra nefa mbola sary mahasarika maso sy manintona mampiasa ny programa quintessential ho an'ny retouching sary.
Makà a makiazy nomerika tonga lafatra ho an'ny sarinao rehetra momba an'io Hallowen mahazo sary mamorona sy manintona kokoa haingana sy mora foana. Amin'ity lahatsoratra hianaranao ireo hevi-dehibe tena ilaina ho an'ny sary amin'ny ankapobeny retouching miaraka Photoshop.
Hallowen ho avy ary samy te hanana isika rehetra sary mampatahotra be ka tsy ho ratsy ny mianatra mamorona fomba retouching sary Zombie hamerenana ny sarinay rehetra momba an'io Hallowen.
Hianarantsika izany hampiasa ireto fitaovana manaraka ireto Photoshop:
fanitsiana sosona (hamafiny, fihodinana, fandanjalanjan'ny loko)
Sivana marevaka (Tsy voatery)
Hampiasa ity manaraka ity izahay dingana:
Aondriho ny feon'ny tongotraol (manapotsy azy)
Mamorona faribolana maizina
Hanova mpandoko loko avy amin'ny sary
1 Hanokatra sary ao amin'ny Photoshop
2 Fotsy ny hoditra
3 Mamorona faribolana maizina
4 Hanova mpilalao loko sary
Sokafy ny sary ao Photoshop
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia mitady sary vitsivitsy izay hiarahanay miasa sy manokatra azy io Photoshop. Vantany vao nosokafana tamin'ny programa haverinay ny sosona lehibe Mba hananana kopia iray ary tsy hamerenantsika ny sary tany am-boalohany, mba hamerenana ny sosona dia mila omentsika azy ny bokotra havanan'ny totozy ary tsindrio ny sosona duplicate.
Fotsy ny hoditra
Para mahafotsy hoditra ny sarinay no zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mamorona a fanitsiana henjana, io sosona fanitsiana io dia mamela antsika desaturate ny loko ny sary mahazo loko volondavenona maivana. Rehefa mamorona an'io sosona io isika dia tsy maintsy manery ny hitsin-dàlana + i hitsin-dàlana ho afaka sosona mihodina ary ampiharo ny vokany raha tsy amin'ireo faritra izay hoso-doko amin'ny borosy.
Ampiasao ny fanitsiana sosona mora be fotsiny ny maka an-tsaina an'izany borosy mahazatra an'ny PhotoshopSatria ny borosy tsirairay dia manana andian-safidy izay mahatonga azy io ho sarotra kokoa, miankina amin'ny zavatra ilaintsika, dia hanova ny masontsivana araka izay tiantsika isika.
Misafidy ny borosy izahay aorian'ny fipihana ny sosona fanitsiana miampy ny fanaraha-maso ny hitsin-dàlana + i ary nanomboka nandoko izahay amin'ireo faritra izay tiantsika hampihena ny lokon'ny hoditra. Ny zavatra mahazatra dia a Zombie manana hoditra somary fotsy amin'ny ankapobeny fa maimaimpoana tanteraka io arakaraka ny zavatra tadiavin'ny olona tsirairay sy tadiaviny.
Ireo masontsivana izay tsy maintsy manova isika rehefa mampiasa ity fitaovana ity dia ireto manaraka ireto:
Opacity: mamela ny vokatry ny borosy ho tsikaritra kokoa na latsaka
Mikoriana: habetsaky ny smudge avy amin'ny borosy
Size: haben'ny borosy
Hamafin'ny: ataovy manjelanjelatra ny sisin'ny tasy
Amin'ity tranga ity dia hampiasa a borososy amin'ny hamafin'endrika kely mba hahatonga ny vokany ho malemy kokoa, hahatratra ny zava-misy lehibe kokoa.
Ny zavatra manaraka hataontsika dia mamorona faribolana maizina amin'ny sary hanomezana endrika hita maso kokoa ny sarinay. Mba hamoronana io vokatra io dia hamorona a curves fanitsiana sosona ary hapetratsika ny ampitomboina fomba maody, aorian'izay dia tsindrio ny hitsin-dàlana + i hitsin-dàlana hahazoana antoka fa ny vokany dia tsy ampiharina afa-tsy amin'ireo faritra tadiavintsika.
Tsikelikely miaraka amin'ny fanampian'ny borosy mandoko ny faritra misy ny maso izahay hahatratra ny vokatr'ireo boribory maizina tadiavintsika. Ny hevitr'ity vokatra ity dia malefaka izy io ka tsara kokoa ny mampiasa a borosio amin'ny fahamendrehana sy ny hamafin'ny fo hampihatra tsikelikely ny vokany. Raha tiana ho hita miharihary kokoa ny vokatsika, ny azontsika atao dia ny mamorona sosona fanitsiana hafainganam-pandeha ary avereno ampiharina indray ny vokany.
Afaka mamorona sosona fanitsiana miolakolaka isika ary manova ny soatoavin'ny sary amin'ny fomba ankapobeny hahazoana ampifanohero ny sary kely kokoa ary manomeza topy maso Zombie zava-misy bebe kokoa.
Hanova mpilalao loko sary
Saika manana ny fomba fakantsika sary Zombie isika ihany no afaka manova ny loko loko ny sary hanome anao a feo maizina kokoa ary mifandraika amin'ity karazana sary ity. Maimaimpoana tanteraka io ampahany io arakaraka izay tadiavin'ny tsirairay, amin'ity tranga ity dia homentsika loko maitso ny sary fa afaka misafidy tonony hafa ianao.
Mamorona a loko fanitsiana fandanjana loko ary manomboka manova ny soatoavin'ny sary isika mandra-pahatongantsika amin'ny feo tadiavintsika, amin'ny sary dia afaka mahita ny tena tonony ampiasaina amin'ity tranga ity isika.
Podemos tarehy mahia kely na asongadino ilay tsiky ho alaivo ny sary mampatahotra mampiasa ny sivana liquefy an'ny Photoshop. Raha te hianatra hampiasa an'io fitaovana io ianao dia afaka mahita an'io hafa lahatsoratra.
Efa fantatray ny fomba famerenana sary ny sary iray hahazoana fomba Zombie tena mahaliana amin'ity Hallowen. Tsarovy fa ny fitaovana rehetra nampiasantsika dia mety ho tena ilaina amin'ny karazana hafa sary retouching.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Retouching sary miendrika Zombie amin'ny Adobe Photoshop
Taona maro nanoratana ny metro any New York: Ny asan'ny mpaka sary Andre D. Wagner